Huawei Watch, famakafakana amin'ny teny espaniola | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Huawei, hevitra, SmartWatch
Tamin'ny 2015 dia nanaitra anay ny mpanamboatra aziatika Huawei Watch, Ny smartwatch voalohany an'ny Huawei izay kasainy hahazoana toerana eo amin'ny tsenan'ny smartwatch.
Izahay dia mitondra anao a fandalinana feno ny Huawei Watch, smartwatch iray izay namela anay fahatsapana tena tsara noho ny famolavolana sy ny fiasa tena tsara. Mpifaninana mendrika ho an'ny Samsung Gear S2, famantaranandro tsara hikapohana amin'ny tsenan'ny akanjo anaovana.
1 Huawei Watch dia manana endrika mahaliana, premium ary ahazoana aina
2 Toetra mampiavaka ny Huawei Watch
5 Fampisehoana sy fiainana bateria an'ny Huawei Watch, fahagagana tena mahafinaritra
6.1 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Huawei Watch dia manana endrika mahaliana, premium ary ahazoana aina
Ny iray amin'ireo toerana manan-danja indrindra amin'ny smartwatch dia ny fahitana azy toy ny famantaranandro mahazatra. Ary amin'ity lafiny ity dia namboarin'ny Huawei Watch izany. Miaraka amin'ny tsipika mitovy amin'ny an'ny Moto 360, mitahiry ny tsy fitoviana, ny smartwatch Huawei vaovao dia mihoatra izany amin'ny famaranana amin'ny alàlan'ny fanolorana tena mahazaka vatana vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny fonony kristaly safira izay miaro ny Huawei Watch amin'ny fanoherana mety hitranga.
Ary ity dia teboka tena miavaka. Nandritra ny iray volana no nanandramako ny Huawei Watch ary tsy nasiana marika ny vatan'ilay fitaovana. Tsy maninona na nokosehina tamina zipper izy na nosedraina tamin'ilay kapoka hafahafa. Ny famantaranandro vaovao an'i Huawei dia mahazaka izany rehetra izany. Ankoatr'izay, ny fanoherana ny vovoka sy ny rano Mamela anao handro tsy misy olana amin'ny Huawei Watch izy ireo, na hampiasanao azy amin'ny andro orana nefa tsy mila miahiahy momba ny famantaranandro ianao.
Ao amin'ny vatan'ny famantaranandro dia ahitantsika bokotra tokana amin'ny ilany ankavanana. Ny toe-javatra somary avo miakatra dia mahatonga azy io tena ahazoana aina, ny maha-izy azy fikasihana mahafinaritra ary mahazaka ampiasaina.
Tena tiako ilay famantaranandro, na dia tsy maintsy jerena aza fa, tsy toy ny maodely hafa, ny Huawei Watch dia manana kinova tokana misy refy 42 x 42 x 11.3mm.
Heveriko fa fandrefesana tonga lafatra ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa izany, na dia afaka mandeha any amin'ny fivarotana rehetra foana aza ianao ary manandrana ny famantaranandro hanamafisana fa mifanaraka tsara amin'ny tanana.
Ny maodely azonay nosedraina dia niaraka tamin'ny fehin-kibo izay tena nahafinaritra ny nanohina. Na dia manolotra karazana tadiny isan-karazany aza i Huawei miankina amin'ny tsironao, ny refiny mahazatra 18 mm mamela anao hisafidy fehikibo be dia be amin'ny katalaogin'ny mpanamboatra aziatika.
Hita amin'ny loko telo, mainty, volafotsy sy volamena, ny fampiasana isan'andro ny Huawei Watch dia mahafinaritra sy mahafinaritra tokoa noho izany 62 grama ny lanjany, ny fanaovana famantaranandro dia tsy manelingelina ny famavanin-tanana amin'ny fotoana rehetra.
La tarehy azo ovaina famantaranandro Io dia hahafahantsika misafidy karazana hoditra efa fantatry ny mpampiasa Android Wear, ary koa afaka misintona efijery azo amboarina mba tsy hisy olana amin'izany.
Raha fintinina dia mampiseho izany Huawei dia nikarakara ny antsipiriany farany rehetra mba hivoahan'ny Huawei Watch ho famantaranandro kanto izay azontsika ampanjifaina mifanaraka amin'ny tsirinay, amin'ny fampiasana ny tadiny vita amin'ny hoditra mba hanomezana endrika ara-panatanjahan-tena azy na hanovana fehin-kibo milamina kokoa raha mitady endrika kanto kokoa isika. Tsy misy zavatra azo kiana amin'izany.
Toetra mampiavaka ny Huawei Watch
Lafiny ara-batana: 42 x 42 x 11.3mm
Screen: 1.4 "AMOLED; Kristaly safira
Fanapahan-kevitra: 1.4 "(400 x 400) 286 dpi
Processeur: Snapdragon 400 (4x 1.2 GHz) // Adreno 305
Memory: 4 GB (tsy azo itarina amin'ny karatra microSD)
Rafitra miasa: Android Wear
Antsipiriany fanampiny: fanoherana rano IP67 / fifandraisana 802.11g / Wifi / Bluetooth 4.0
Sensors: Senseur tahan'ny fo / Accelerometer / Gyroscope ary motera Haptic
Batterie: 300 mAh // Fandoavana tsy misy tariby
Price: 349 euro amin'ny alàlan'ny Amazon
Amin'ny taratasy dia manana ny mampiavaka azy amin'ny rindrambaiko avo lenta rehetra isika. Fa ahoana no fiasan'ny Huawei Watch? Marina, toy ny landy. Ny smartwatch vaovao an'i Huawei dia haingana be, Tsy nahatsikaritra ny lagy aho na oviana na oviana, mamela antsika hamakivaky ireo varavarankely samihafa amin'ny fomba madiodio.
Mampalahelo fa tsy afaka nanandrana ny kinova farany amin'ny Android Wear tao amin'ny Huawei Watch nanomboka tamin'ny olana ara-teknika dia voatery nanemotra kely ny fanavaozana izy ireo, saingy ny fahatsapana amin'ny ankapobeny dia tena tsara.
Ny fampifanarahana ny famantaranandro amin'ny finday avoakanay dia tena tsotra. Mila misintona ny fampiharana ofisialin'ny fotsiny ianao Android Wear, misy ao amin'ny magazay fampiharana Google, mba hahafahan'ny famantaranandronao mifangaro amin'ny telefaonao amin'ny alàlan'ny Wi-Fi na Bluetooth.
Mikasika ny fiasany, ny Huawei Watch, ankoatry ny fanompoana azy ho famantaranandro mahazatra, dia mamela antsika hahazo fampandrenesana, hamaky azy ireo ary valio izay mailaka na WhatsApp tonga ato aminay. Eny, mamaky tsara ianao. Tany amin'ny toerana iray dia nilaza izy ireo fa ny fampandrenesana WhatsApp dia tsy azo valiana amin'ny Android Wear fa tsy marina tanteraka izany, satria amin'ny alàlan'ny baiko am-peo dia afaka mamaly ianao nefa tsy misy olana.
Ary ny rafitry ny fanekena ny feo dia miasa tena izy, ary manompo ihany koa ampiasao ny serivisy Google Now. Tsy nanana olana tamin'ity lafiny ity aho. Amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mangataka vaovao momba ny toetrandro, manomboka ny browser, milalao mozika ... safidy mahaliana sy ahazoana aina ampiasaina ahafahanao manery kely kokoa ny fahafahan'ny Huawei Watch ho famantaranandro marani-tsaina.
Ny iray amin'ireo zavatra nandiso fanantenana ahy indrindra tamin'ny fandaharam-potoana samihafa nandramako, ankoatran'ny Samsung Gear S2, dia ny sensor amin'ny tahan'ny fo. Rehefa mandeha mihazakazaka aho dia te-hanara-maso ny fitempon'ny foko ary amin'ity lafiny ity dia tsy nahomby ny Huawei Watch.
Tsy toy ny famantaranandro hafa, izay ilainao hamelana ny static statis ka mamantatra ny fitepon'ny fony, ary indraindray aza tsy nahomby ilay fitiliana, aryNy sensor an'i Huawei dia mandeha tsara, na dia mihetsika aza.
Nampitahako tamin'ny mpanara-maso ny tahan'ny fony izany ary kely ny fahasamihafana, iray na roa be ny be indrindra, ka raha te hanararaotra an'io endri-javatra io ianao ary mitady sensor tahan'ny fo tsara amin'ny smartwatch dia tsy hanao izany ny Huawei Watch mandiso fanantenana anao.
Misaotra an'io koa 6-axis, ny famantaranandro Huawei vaovao dia afaka manavaka azy ho azy rehefa mihazakazaka ianao, mandeha, mivezivezy… Etc, mamela anao hanara-maso hetsika ara-batana amin'ireo rindranasa efa napetraka mialoha, ary koa mifanaraka amin'ny fampiharana toa ny Nike Plus.
Ny iray amin'ireo tanjaky ny Huawei Watch dia misy ny sariny. Ary ny ekipa mpamolavola dia nampiditra efijery 1.4-inch amin'ny teknolojia AMOLED izay manolotra maranitra tena tsara miaraka amin'ny mari-pana miloko voafintina tsara manolotra kalitaon'ny sary tena tsara amin'ny tontolo iainana, ary koa manolotra zoro fijery tena tsara. Ankoatr'izay, ny zava-misy amin'ny fahafaha-manana ny efijery mavitrika foana nefa tsy mihinana tafahoatra ny baterian'ny famantaranandro dia andinindininy tokony ho raisina.
Miaraka amin'ny efijery Huawei Watch mahafinaritra ny mamaky lahatsoratraNa dia tsy mandeha tsara aza ny Android Wear amin'ny sary lehibe dia mampihena be ny kalitaony. Mazava ho azy, amin'ity fizarana ity dia tsy afaka manome tsiny an'i Huawei isika.
Na dia marina aza fa tsy manana sensor malefaka ny Huawei Watch, ny dial dia manome maranitra faran'izay henjana amin'ny tontolo iainana. Ny Huawei Watch dia mamela anao hametraka ny famirapiratan'ny efijery manolotra ambaratonga dimy fa efa nampiasaiko hatrany tamin'ny 4 ary tsy nanana olana tamin'izany aho.
Eny, miseho ny rantsan-tànana aorian'ny fampiasana azy, noho izany dia tsy maintsy diovinao matetika matetika ny écran mba ho toa madio ny Huawei Watch. Matokia, fa ny efijery safira dia manohana ny zava-drehetra. Izaho manokana dia nanadio azy tamin'ny karazan-pitaovana rehetra ary tsy nanana tsy nisy ratra teo amin'ny efijery.
Fampisehoana sy fiainana bateria an'ny Huawei Watch, fahagagana tena mahafinaritra
Su Bateria 300 mAh Somary ambany kokoa noho ny an'ny maodely hafa izy io, na dia asehon'i Huawei aza fa tsy ny isa ihany no manan-danja satria ny fizakan-tena ao amin'ny Huawei Watch dia mihoatra ny salanisa. Ny tsiambaratelonao? ny fanatsarana tonga lafatra eo amin'ny efijery AMOLED sy ny rindrambaiko famantaranandro.
Tamin'ny voalohany dia tsikaritro fa naharitra mihoatra ny iray andro sy sasany ny famataranandro. Fahadisoam-panantenana lehibe taorian'ny nandinihako izany ny fizakantenan'ny latsaky ny roa andro dia tsy mety indrindra amin'ny famantaranandro marani-tsaina. Nanomboka nanararaotra ny efijery AMOLED aho ary niova ny zava-drehetra.
Mampiasà fàfana mainty ary mamono ny famantaranandro amin'ny alina dia mitazona ahy ny famantaranandro telo andro fampiasana amin'ny famataranandro mandritra ny 16 ora manaraka toetr'andro. Ary ny fampiasako azy dia mitovy amin'ny famantaranandro hafa izay tsy naharitra mihoatra ny iray andro sy sasany.
Miharihary mampiasa interface maro loko kokoa ary mijaly foana ny écran amin'ny fizakan-tenany, andro sy antsasaky ny fanamarihako, fa ny famonoana ny famantaranandro amin'ny alina dia vitako ny nankany amin'ireo roa andro tsy nanana olana.
Ok, mbola lavitra ny lalana mankany fahaleovan-tena mendrikaHeveriko fa ny famantaranandro tonga lafatra dia tokony haharitra herinandro, fa ny telo andro kosa tsy ratsy velively. Ilay hany tokana fa hitako dia tonga miaraka amina fotony famahana azy.
Ary izany no Tsy tiako ny rafitra famonoana andriamby an'ny Huawei Watch. Raha ny fahitako azy dia tokony hanaraka ny dian'ireo maodely hafa toa ny Samsung Gear S2 na Moto 360 izy ireo, manolotra rafitra iray ahafahanao manararaotra ny famataran'ora milaza ny fotoana eo am-panafarana.
Amin'ny tranga Huawei Watch, ny base charge manery ny famantaranandro hametraka mitsivalana very tanteraka io fampiasa io. Tsikaritro ihany koa fa indraindray ny base tsy mahafantatra ny famantaranandro, na dia voadio aza ny fanadiovana ny tsimatra amin'ny smartwatch.
Huawei dia nanao a asa tena tsara miaraka amin'ny Huawei Watch, miavaka amin'ny famantaranandro sisa amin'ny Android Wear. Amin'izay rehetra nanandramako tamin'ity taona ity, tsy isalasalana fa io no safidy tiako indrindra.
Un modely tena manintona izay mampiakatra ny bara eo amin'ny tsenan'ny smartwatch misaotra ny endriny tsara, ny kalitaon'ny famaranana ary ny fizakan-tena raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy. Ankehitriny, mendrika ny mividy smartwatch ve? Raha ny fahitako azy dia mbola somary voafetra ihany ny fiasan'ireto fitaovana ireto ary mifandraika ihany ny mahasoa azy ireo ka sarotra ny manamarina ny fampiasam-bolanao.
Mazava ho azy, raha tena mila famantaranandro marani-tsaina ianao dia faly fa ho iray amin'ireo voalohany manana fitaovana amin'ity karazana ity, aza misalasala. Ny Huawei Watch dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra hodinihina. Ho fanampin'ity taona ity 2016 Android Wear dia hahazo fanavaozana fahatelo izay mety hahagaga antsika.
Kalitao tsara amin'ny efijery AMOLED anao
Fahaleovan-tena hatramin'ny 3 andro fampiasana
Tsy tiako fotsiny ny fototry ny famandrihana azy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Watch, mamakafaka ny famantaranandro tsara indrindra amin'ny Android Wear izahay
Lobombre dia hoy izy:
Voalazan'ny torolalan'ny mpampiasa fa tsy tokony hatao ny mandro miaraka aminy
Valiny tamin'i Lobombre
Ahoana ny fomba hahazoana ny sasany amin'ireo endri-javatra Android N tsara indrindra amin'ny finday avo lenta
Xiaomi vaovao dia miseho miaraka amin'ny efijery 4,3-inch sy puce Snapdragon 820